Ezona zixhobo zibalaseleyo zango-2017, zithini iimveliso zonyaka? | Iindaba zeGajethi
Ezona zixhobo zibalaseleyo zango-2017
Nje ukuba unyaka uphele kwaye kungakhange kubekho nto yothusayo ngokweendaba kwihlabathi lezobuchwephesha, lixesha lokuba ubale kwaye ukhangele ukuba zeziphi ezona zixhobo zibalaseleyo eziye zafikelela kwimarike ngonyaka ka-2017. Ukuba ufuna ukwazi, Ezizezona mveliso ze-elektroniki zimbi ezibonisiweyo kulo lonke u-2017, ndiyakumema ukuba ujonge inqaku endikhankanyileyo ezona zixhobo ziphambili zango-2017.
Kuwo wonke unyaka esiwuqalileyo, siya kuba nethuba lokwazi iimveliso kunye nezixhobo eziza kuthi ziphumelele kwintengiso ngeentlobo ezahlukeneyo zetekhnoloji ezenzeka unyaka wonke, ziqala ngeCES ezibanjelwe eLas Vegas , elandelwa yi-MWC ebibanjelwe e-Barcelona kwaye iphela nge-IFA eBerlin. Kodwa ngelixa loo mihla ifika, siza kuvavanya ukuba kutheni bekhona ezona zixhobo zibalaseleyo zika-2017.
Okokuqala, kufuneka kukhunjulwe ukuba ezinye zezixhobo esikubonisa zona kweli nqaku aziboniswanga kwenye yezi teknoloji, kodwa umenzi ubambe umsitho okhethekileyo wokuwazisa, ke kunjalo khange silinde kuphela olu hlobo lweziganeko, kodwa unyaka wonke silinde ukubona, ukukhangela kunye nokuvavanya eyona teknoloji intle kwaye imbi kakhulu kulo nyaka uphelileyo.
1 Xbox enye X
3 Nintendo Tshintshela
7 Galaxy Note 8 kunye Galaxy S8
8 I-Sony Alpha A7R III
9 Uthotho lweApple 3 LTE
Nangona iMicrosoft yazisa iXbox One X phakathi enyakeni, bekungekho ekuqaleni kukaNovemba xa ifika kwintengiso kwaye ukusukela ngoko iye yaba yikhonsoli yokuqala kwintengiso ekwaziyo ukudlala imidlalo kwisisombululo se4k, ngaphandle kokuba ukubhenela ekulingiseni ngokungathi kwenzeka ngePlayStation 4 Pro.I-Xbox One X iyafumaneka nge-euro ezingama-499, ii-euro ezingama-100 ngaphezulu kokhuphiswano oluthe ngqo lukaSony, iPlayStation 4 Pro.Ukongeza, isinika i-TB yokugcina kwangaphakathi kunye ne4k Umdlali we-UHD Blu-ray, ukuba liziko elifanelekileyo lemultimedia kulo naliphi na ikhaya Ngubani ofuna ukonwaba kungekuphela kwimidlalo kwisisombululo sabo esiphezulu, kodwa nakulo naluphi na uhlobo lomxholo wee-audiovisual.
Thenga iXbox One X kwiAmazon
IAmazon yayingumvelisi wokuqala ukubheja kuthotho lwezithethi zasekhaya ezifanelekileyo, esivumela ukuba sinxibelelane nayo ngemiyalelo yelizwi. Kwi-2014, yaphehlelela i-Amazon Echo yokuqala enikwe amandla ngumncedisi we-Alexa. Kwiminyaka emithathu kamva nasemva kokwandisa uluhlu lolu hlobo lwemveliso, yazisa iAmzaon Echo Show, isithethi esihlakaniphile esikhatshwa siscreen se-7-intshi, esingakwaziyo kuphela fowuna okanye wenze ividiyo kwezinye izixhobo ze-Echo okanye ii-smartphones ezinezicelo ezifakwe kwi-smartphone yazo, kodwa sinokwenza uphando olukhawulezayo kwi-Intanethi, sibukele iividiyo, sidlale umculo, sithenge ...
Emva kokungaphumeleli kokugqibela kwezorhwebo ebenakho inkampani yaseJapan iNintendo kwihlabathi leekhonsoli, inkampani ikwazile ukubaleka ngeNintendo switch, imodeli ekhawuleze yaba yeyona nto ithengisa kakhulu unyaka wonke esiwugqibileyo iintsuku ezimbalwa eyadlulayo, ibonisa abasebenzisi ukuba ngaphandle kokusilela kwangaphambili, abalandeli benkampani khange baphose itawuli kwaye banethemba.
I-Nintendo switchch isinika ikhonsoli ephathekayo enescreen se-6,2-intshi, kodwa sinokuqhagamshela kumabonwakude wethu ukonwabela inani elikhulu lemidlalo esele ikhona kwesi sixhobo, kamnandi ukusuka kwisofa ekhayeni lethu. IJoy-Con, ulawulo olukwicala leconsole, aludityaniswanga ngokulula kwaye luba ngamaqhina olawulo xa sifuna ukonwabela imidlalo kumabonwakude, siyikhonkco le-2-in-1 esinakho thatha naphina ngaphandle kwengxaki.
Inkampani eqinile yase-China i-DJI ayikhange ibe sisalathiso kuphela kwihlabathi leedrones, kodwa ikwangunkokheli kwicandelo, ingumvelisi osinika ezona modeli, zonke zinomgangatho obalaseleyo. I-DJI iphehlelele kulo nyaka uphelileyo umfuziselo weSpark, idrone encinci, ethi isuke esandleni sethu, ethi ibandakanya bonke ubuchwepheshe be-DJI kunye neempawu Ukongeza kukhetho lwenqwelomoya olukrelekrele, isixhobo sokuqinisa kunye nekhamera edityanisiweyo enomgangatho obalaseleyo esinokuthi sandise ngayo ubuchule bethu ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu.
Kodwa eyona nto imnandi malunga nale drone, siyifumana kwindlela yokuyilawula, kuba sinokuyenza ngokusebenzisa izijekulo ukuze ithathe isibhamu xa ijolise kuthi. I-DJI Spark iyakwazi ukusibona kwaye ilandele indlela yethu, nokuba kukuhamba, ukunyuka, ukukhwela ibhayisikile ... ukurekhoda iihambo zethu zangaphandle ngaphandle kwalo naliphi na ilungu losapho ngaphandle kwendiza, sikwazi ukunqanda imiqobo enokudibana nayo kwindlela. Sinokuyilawula ngokufaka isicelo se-smartphone esisinika inani elikhulu lokukhetha kunye nezinto ezinokwenzeka.
Thenga i-DJI Spark kwiAmazon
Ikhonsoli yeNtsumpa yeNtsomi engwevu yakudala xa yayiphinda yamiliselwa kunyaka ophelileyo I-SNES Classic iza ilayishwe ngemidlalo engama-21 ye-Retro efana ne-Super Mario World, iThe Legend of Zelda, iDonkey Kong Country ... kunye nekhonsoli ngokwayo kunye nolawulo sivumele ukuba sikhumbule elo xesha apho sasisonwabele eyona console ilungileyo njengabancinci eyayifumaneka kwintengiso ngelo xesha. Ngaphandle kwemizamo eyenziwe nguNintendo ukuthintela ukuthengiswa kwakhona ekubeni yindawo yokuthenga yabona basebenzisi baninzi, njengoko kwenzekayo kunyaka ophelileyo ngeNintendo Classic, iphinde yabonisa indlela ebingalindelanga ukuba intengiso itsale kangaka, kwaye kungekudala emva kokufika kwimarike yaphela kwisitokhwe.
Thenga i-SUPER NES Classic kwiAmazon
Inkampani esekwe kwiCupertino iphinde yaphinda yaba ngumvelisi wamva nje owamkela inkqubela phambili kwezobuchwephesha ebezifikile kwintengiso kule minyaka idlulileyo. Andibhekiseli kuphela kwisixhobo esingafakwanga njenge-iPhone X, kodwa ndikwabhekisa ekusetyenzisweni kwezikrini ze-OLED, itekhnoloji evela esandleni somntu okhuphisana nayo kwaye isinika umgangatho womfanekiso ongazange ubonwe ku An. Iphone Kodwa ukuba i-iPhone X ime ngaphezulu kokhuphiswano lwento, kungenxa yethebhu yolwazi ebekwe phezulu kwesikrini, itab apho iisenzi ezenza ukuba umsebenzi usebenze khona. ukuvula i-terminal ebusweni bethuKuba iApple ithathe isigqibo sokuba inzwa yeminwe yimbali kwaye ayifumaneki ngasemva kwisixhobo.
Thenga i-iPhone X 64GB kwiAmazon
Galaxy Note 8 kunye Galaxy S8
Isamsung ikwazile ukubuyisa ukusilela kweGlass Qaphela 7, imodeli ngenxa yeengxaki zebhetri ezazichaphazela isixhobo, kwanyanzeleka ukuba siyirhoxise kwintengiso. I-Galaxy S8 kunye ne-S8 +, zaziswa ekupheleni kuka-Matshi, ziziitheminali zokuqala kwimarike eneefreyimu ezincitshisiweyo zaya kutsho kwelona liphezulu kunye nescreen-by-side screen, esingakhange sibe sisalathiso kwimarike okoko uninzi lwabenzi ndibeke ecaleni ukhetho lwezikrini ezigoso kumacala. Esi sikrini sisinika imvakalelo ebonakalayo apho phantse yonke iitheminali siscreen kwaye phi Imiphetho ejikeleziweyo inomsebenzi ohambelana nayo Ukuvumela ukuba uvule usetyenziso ukusuka kumda ofanayo, ukunika usetyenziso oluluncedo kumda ojikeleziweyo.
Thenga i-Samsung Galaxy S8 kwiAmazon
I-Galaxy Note 8 yaziswa ngokusesikweni ekupheleni kuka-Agasti, uyilo olusikhumbuza nge-S8 yeGlass kodwa inkulu, kodwa inekhamera ezimbini kunye nomfanekiso omangalisayo wokuzinza okwangoku okwangoku yeyona nto ibalaseleyo esinokuyifumana. umnxeba. Ukongeza, i-S-Pen iphinda ibuye ivithamini ngokupheleleyo, njengesizukulwana esitsha kwaye isinike inani elikhulu lemisebenzi emitsha ukuze sikwazi ukufumana uninzi lweNqaku nayo yonke into emele bonke abo abasebenzisi abangakwaziyo ukwenza ngaphandle kwesinye isiphelo sendlela ngaphandle kweNqaku leSamsung.
Thenga i-Samsung Galaxy Note 8 kwiAmazon
Ngokuphuculwa okubonakalayo ngaphezulu kwangaphambi kwayo kunye nexabiso eliphantsi kune-Sony's A9 Alpha, esandula ukwaziswa iSony Alpha A7R III yenye yezona khamera zibalaseleyo zingenazo. I-Sony Alpha A7R III inesisombululo esiphindwe kabini semodeli ye-A9, ine-autofocus ephindwe kabini ngokukhawuleza njenge-A7R II, nangona kufanele kuqatshelwe ukuba i-A9 ibonelela ngokudubula ngokukhawuleza. Amaxabiso asezantsi kunye nokusebenza okwandisiweyo kunokwenzeka ukuba kungaphezulu kokulingeneyo ukufota abafundisi abaziingcali kunye nabaselula ngokufanayo.
Uthotho lweApple 3 LTE
Nangona iApple yeWatch Watch Series 3 inguhlobo oluphuculweyo lwenqaku 3, uninzi luya kucinga ukuba akufuneki lube kolu luhlu. Kwaye ayisiyiyo kwaphela. Ndicinga kuphela ukuba imodeli ye-LTE, imodeli okwangoku engafumanekiyo eSpain okanye nakweliphi na ilizwe elithetha iSpanish, ukuba kufanelekile, kuba isinika unxibelelwano esilufunayo mihla le ngaphandle ukubhenela ekubeni ihlale i-iPhone yethu ibambekile. I-Apple Watch Series 3 LTE isinika ukudityaniswa kwedatha ye-GPS, i-altimeter kunye ne-LTE Sinokuphuma ngayo siye kudlala imidlalo ngelixa simamele iApple Music, ngaphandle kokuxhomekeka kwi-iPhone. Into embi, njengesiqhelo kolu hlobo lwesixhobo, bubomi bebhetri, kodwa ixesha kunye neenguqulelo ezintsha ze-watchOS ziya kuphucuka, njengoko kwenzekile ngeSamsung Gear S2 kunye ne-S3 ngonxibelelwano lwe-LTE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Ezona zixhobo zibalaseleyo zango-2017
IPanasonic iqala ngokutsha iiTV zayo ze-OLED kwiCES 2018